- स्वस्तिका बख्रेल | मंगलबार, चैत २२
शनिबार, साप्ताहिक बिदाको दिन । साताभरिको नियमित कामको भारी बिसाएर सुस्ताउने क्षण ।
बिदा त भन्ने न हो, शनिबार अरुभन्दा व्यस्त हुन्छ । साताभरि त्यही बिदाको दिन गरौँला भनेर काम साँचेर राखिने रहेछ । यो शनिबार पनि म व्यस्त थिएँ । बिहानै उठेँ । अँगेनोमा ममीले आगो बालिसक्नुभएको थियो । जाडोमा आगो ताप्ने बानी गइसकेको छैन । आगो ताप्न बसेँ ।
ममीले पकाएको मीठो चियाको चुस्की लिँदै मोबाइलमा नेट चलाउन खोजेको लाइन रैनछ । मोबाइलले हाम्रो बानी यति बिगारेको छ कि अब एक्लै समय बिताउनै सकिँदैन । चियासँगै मोबाइलमा फोटो ग्यालरीमा गएर पुराना फोटाहरू हेर्न थालेँ ।
मोबाइलमा केही समयअघि आफैँले गरेको एउटा कामका तस्वीरहरू आए । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका– १४ मा नगरस्तरीय किशोरी सञ्जालले केही समयअगाडि निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । ती तस्वीर र भिडियोहरू सोही कार्यक्रमका थिए ।
हामीले सो वडाका वडाध्यक्ष, वडासचिव, स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज, स्वयंसेविकाहरूसमेतलाई बोलाएर स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम गरेका थियौँ । यो वडामा धेरैजसो दनुवार जातिको बसोबास छ । आर्थिक, सामाजिक रूपमा समेत पिछडिएको भएका कारण हामीले स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि यो वडालाई छानेका थियौँ ।
‘एक व्यक्ति, एक प्याड’ को योजनासहित हामीले प्याड वितरण गरेका थियौँ । हेर्दा धेरै सानो कुरा हो, स्यानिटरी प्याड । तर, महिला तथा किशोरीहरूका लागि यसको ठूलो महत्त्व छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट निर्माण गरिएको यो स्यानिटरी प्याड किटाणुको संक्रमण गराउन सक्ने कुराबाट पूर्ण रूपमा सुक्षित राखी निर्माण गरिएको हुन्छ । जसले महिनावारीका बेला संक्रमण हुनबाट बचाउँछ ।
हामीसँग एक दिनको समय थियो । हामीले ३ देखि ४ सयवटा स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने योजना हामीले बनाएका थियौँ । स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्जको हातबाट किशोरी समूहकै एक किशोरीलाई स्यानिटरी प्याड दिएर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरुवात गर्‍यौँ ।
स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका महिला दिदीबहिनी र किशोरीहरू नै संकोच मानिरहेका थिए । तिर्खा लागेर बाहिर पसलमा पानी खान जाँदै थियौँ । त्यही बेला एक जना दिदीले आफूसँगै आएकी साथीसँग कुरा गर्दै थिइन्, ‘यो प्याड कसरी लगाउने हो, मलाई यसबारेमा केही थाहा छैन ।’
कमलामाई नगरपालिका मध्यपहाडी जिल्लाको एउटा शिक्षित नगरपालिकाभित्र पर्छ । तर, अझै पनि यहाँका पिछडिएका महिलाहरूमा प्याडसम्बन्धी सामान्य ज्ञानको समेत कमी पाउँदा हामीलाई नराम्रो लाग्यो ।
स्यानिटरी प्याड वितरण गरेर मात्रै हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुँदैन । यदि लैजाने दिदीबहिनीहरूलाई यसबारे साँच्चै ज्ञान नै रहेनछ भने वितरण गर्नुको के अर्थ ? मलाई यो प्रश्नले भित्रभित्रै चिमोट्यो ।
मैले ती दिदीबहिनीलाई बोलाएर यसबारे थप जानकारी दिने योजना बनाएँ । उहाँहरूलाई हामीले स्यानिटरी प्याड वितरण भइरहेको स्थानमा बोलाएर प्याड लगाउने तरिका र यसको व्यवस्थापनका विषयमा सोध्यौँ । किशोरीहरूलाई पनि हामीले यसबारेमा सोध्यौँ ।
उहाँहरूको अनुहार रातो भयो । एक किसिमले अनुहारको रङ नै उडेको थियो । ओहो ! आफैँले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडबारे पनि यस्तो संकोच ? म आफैँ अचम्मित भएँ । अक्क न बक्क भएँ । मैले त सानासाना नानीहरूले पनि स्यानिटरी प्याडका बारेमा भनेको सुनेको थिएँ ।
सिन्धुली सदरमुकामजस्तो ठाउँमा पनि प्याडका बारेमा जानकारी नभएका महिलाहरूको यति ठूलो जमात । अब हामीले स्यानिटरी प्याड वितरण गरिसकेपछि यसबारेमा थप जानकारी दिनैपर्ने भयो ।
स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रममा आएका छ/सात जना बुढी हजुरआमाहरूमध्ये एक जनाले प्याडको पोको लिँदै भन्नुभयो, ‘यो प्याज उम्रिन त उम्रिन्छ नि !’ उहाँ प्याड हैन, प्याज वितरण हुँदैछ भन्ठानेर पो आउनुभएको रहेछ ।
एक घन्टाभन्दा बढी भेला भएका करिब डेढ सय महिलाहरूलाई स्यानिटरी प्याडको महत्त्व, लगाउने तरिका, यसलाई २/३ घन्टामा फेरिरहनुपर्ने कुरा र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाएर खाना खान नजिकैको होटलमा पुग्यौँ ।
होटलमा खाना खाएर फर्किंदा लाइन लागिसकेको थियो । लाइनमा ६/७ जना बुढी हजुरआमाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई पनि हामीले यो लगाउने तरिका, यसको व्यवस्थापनलगायतका कुरा सिकायौँ ।
त्यत्तिकैमा एक जना हजुरआमाले प्याडको पोको लिँदै भन्नुभयो, ‘यो प्याज उम्रिन त उम्रिन्छ नि !’ यो प्रश्नले मलाई झनै तीन छक्क बनायो । उहाँ त प्याड हैन प्याज वितरण भइरहेको छ भन्ठानेर पो आउनुभएको रहेछ । उहाँ पनि स्थानीय दनुवार समुदायकै हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँलाई पनि प्याड भन्ने कुरा थाहा थिएन । हुन त उहाँ हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको मान्छे । उहाँहरूको पालामा यस्तो प्याडको व्यवस्था नै थिएन । सामाजिक काममा भड्काउनेहरू पनि उत्तिकै हुँदा रहेछन् । कसै–कसैले त यसो पनि भनिरहेका थिए, ‘यो प्याड किन लगाउनुपर्‍यो ? टालो लगाउँदा भइहाल्छ नि । हामीले उसबेलादेखि साडीका टाला लगाएर अहिलेसम्म भएकै छ । छोराछोरी पनि स्वस्थ नै छन् । यिनीहरू कसले दिएको पैसा पचाउन आएका हुन् ।’
केहीबेर प्याडका बारेमा सम्झाइबुझाइ गरेर सबैलाई लुकाएर होइन, निर्धक्क भएर हातमा लिएर जानु भनेर पठायौँ ।
हामीसँग भएका सबै प्याडहरू वितरण गरिसकेर घर फर्कियौँ । आखिर किशोरीहरूसमेत आफ्नो समस्याबारे खुलेर बोल्न नसक्ने र महिनावारीबारे थाहा नभएर कति धेरै लापर्वाहीहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुराले मेरो मनमा भने धेरै प्रश्नहरू एकैपटक उकुसमुकुस हुनेगरी आइरहेका थिए ।
एक दिनको कार्यक्रम त गरियो । तर, यो आफैँमा बालुवामा पानी हालेजस्तै लाग्यो । महिनावारी कुनै लाज मान्नुपर्ने कुरा होइन । बरु यो त परिपक्वतातिर जाँदै गरेका महिलाहरूका लागि गर्वको कुरा हो ।
महिला र किशोरीहरू बोल्न सकेनन् । उनीहरूमध्ये कतिपयमा पाठेघरसम्बन्धी समस्या रहेछ । समूहमा बोल्न नसकेका महिला तथा किशोरीहरूले मलाई कुनामा बोलाएर सेतो पानी बग्ने समस्यादेखि घाउखटिरा आउनेसम्मका धेरै समस्याबारे प्रश्न गरे । तर म आफू मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हैन । त्यसैले आफूले जानेको कुरा भनिदिएँ र नजानेका कुराहरू स्वास्थ्य इन्चार्ज र स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सोधेर सल्लाह दिएँ ।
मैले यो कुराबारे ममीलाई शेयर गरेँ । उहाँले पनि यो विषय चासोपूर्वक सुन्नुभयो । हाम्रोमा विकास नभएको होइन । तर, हामीलाई विकास भनेको बाटो, पुल सडक, मठमन्दिरजस्ता कुराहरूको विकास मात्रै हो भन्ने धारणा व्याप्त छ । आमजनतामा स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच र चेतनाको विकासमा पर्याप्त काम भएकै छैन । त्यसैले विकासबारे बहस हुने समाजमा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सचेतनाबारेमा कम जानकारी हुने गरेको कुरा उहाँले भन्नुभयो ।
यति मात्रै होइन, समाजमा आएका योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रममा टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली छ । अझै पनि समाजका पिछडिएका वर्गहरूमा समानुपातिक विकास पुगेकै छैन । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरामा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
उनीहरू आफ्नै दुनियाँमा छन् । उनीहरूलाई न स्वास्थ्यबारे थाहा छ, न त अधिकारबारे नै । ममीले हाम्रो कामको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले ‘तिमीहरूको अभियान ठीक ठाउँबाट सुरुवात भयो तर यसलाई निरन्तरता दिएर त्यो समुदायलाई अगाडि ल्याउन काम गर्नुपर्छ’ भन्ने सुझाव दिनुभयो ।
यो समुदायमा अझै पनि बालविवाह भइरहेको छ । प्रजनन् स्वास्थ्यबारे जानकारी छैन । कतिपयका त १८/१९ वर्षकै उमेरमा दुई/तीन जनासम्म बच्चा छन् । उनीहरूको राम्रो हेरचाह छैन । यतातिर स्थानीय सरकारको ध्यान किन नपुगेको होला ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २२, २०७८, ०६:४८:२६